प्रदेश ७ बाट विना मगर मन्त्री बन्ने पक्का, एमालेका गणेश ठगुन्ना, नारदमुनी रानाको के हुन्छ ?::Leading Digital News Portal Of State7| Political News, Science, Social, Sport, Economy, Business, Entertainment
प्रदेश ७ बाट विना मगर मन्त्री बन्ने पक्का, एमालेका गणेश ठगुन्ना, नारदमुनी रानाको के हुन्छ ?
प्रकाशित मिति : बिहिबार, फाल्गुन १०, २०७४
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवम स्वं प्रकाश दाहाल पत्नी विना मगरलाई मन्त्री बनाउन लबिङ सुरु गरिएको छ । विना प्रदेश ७ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित एकमात्र महिला हुन् । यसकारण पनि उनको सम्भावना बढी छ ।
यसको लागि प्रदेश ७ बाट मन्त्रीका प्रमुख दाबेदार मानिएका लेखराज भट्टले विनाको नाममा सहमति जनाएका छन् । विनाको नाममा सहमति जनाउँदै प्रदेश ७ माओवादी केन्द्र इन्र्चाज समेत रहेका भट्टले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका छन् । बिहीबार अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका भट्टले विनालाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव राखेका हुन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर प्रदेश इन्चार्ज भट्टले बिना मगरलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको प्रदेश प्रचारप्रसार विभाग संयोजक ओमविक्रम भाट ‘सरल’ले जानकारी दिए । ‘भौगोलिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने र महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले बिना मगरलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्नुभएको छ,’ सरलले भने, ‘नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारमा महाकाली अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गराउन नसकेका कारण केन्द्र सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउन सिफारिस गर्नुभएको हो ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बिना मगर कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धीभन्दा दोब्बर मत ल्याएर विजयी भएकी हुन् । उनी प्रदेश ७ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित एकमात्र महिला नेतृ हुन् ।
एमालेबाट गणेश ठगुन्ना, नारमुनी रानाको का मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको उद्यपी पार्टीले उनीहरुको विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन् ।